News Collection: आर्यनले तिरे बैगुनीलाई गुन !
यस्तो लाग्छ –आर्यन र रेखा गसिपका ती पात्रहरू हुन् जो आपसको सम्बन्धलाई लिएर बेला–बेला चर्चामा आइरहन्छन् । यी दुईको विकसित सम्बन्धलाई बुझ्न हालैको एक अवार्ड कार्यक्रमको किस्सा पर्याप्त छ । जुन किस्सालाई लिएर मिडियाले रेखा र आर्यनलाई पछ्याइरहे । उक्त समारोहमा आर्यन रेखाका हिरो त बन्न सकेनन् तर अहिले आएर आर्यनले रेखालाई आफ्नो सबैभन्दा जोडी सुहाउँदो हिरोइनका रुपमा नाम लिएका छन् ।अहिलेसम्म काम गरेका नायिकाहरूमध्ये दर्शकले आफूलाई रेखाको जोडीसँग सुहाएकाले फेरी हेर्न चाहेको आर्यनले बताएका छन् । रेखा फिल्मसकै हिट सिनेमा 'किस्मत'बाट आर्यन रेखाको जोडीसँगै हिरोका रुपमा रजतपट डेब्यु गरेका थिए । यो जोडीले पछि पनि सफल सिनेमा 'कसले चोर्‍यो मेरो मन' सँगै गर्‍यो । त्यसपछि सुरु भयो असमझदारीको श्रृङ्खला । यतिसम्मकी कुनैबेला मनपराइएको यो जोडी यतिबेला उत्तर र दक्षिण फर्किएको छ ।
तर, आफूसँग जोडी सुहाउने भनेर आर्यनले रेखालाई फकाउन खोजेका हुन् कि बैगुनीलाई गुन तिर्न । कमसेकम बोलीबाट भएपनि आर्यनले रेखालाई गुन लगाएको मान्नुपर्छ । संयोगमात्र होइन होला, हालैको एक चियागफमा रेखापति छविले आर्यन र रेखा नेपाली फिल्मका स्टारपावर भएको बताएका थिए । छवि त आर्यनप्रति नरम छन् भने रेखा किन अनुदार ? मिले भैहाल्यो नि –आर्यन र रेखाको सुहाउँदो जोडी ।